ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ကျွန်းပေါ်မှ ဖြစ်ရပ်များ
၁) စင်္ကာပူရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားခဲ့သူများ
ဒီလူတွေကတော့ ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန် ၊ ဘ၀အချိုးအကွေ့တွေ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဖြစ်နေချိန်မှာ ဘေးမှနားခါးစရာတွေကလည်း များပြားနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူတွေအားလုံးဟာ မိမိအိတ်ထဲက မိမိစိုက်ထုတ်ပြီး ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ဘဲ လုပ်နေကြချိန် မဆီမဆိုင် အမြတ်ထုတ်သူများအကြောင်းနှင့် ရောမွှေပြောဆိုခြင်းများကလည်း ဒုနဲ့ဒေး ။
ဘ၀မှာ ဘယ်အရာမဆို မှန်ကန်ရဲရင့်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ၊ လေးနက်သော စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုများ ၊ သစ်လွင်သော ခြေလှမ်းများကို အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဟာ သီအိုရီစာအုပ်ကြီးတွေ ကိုင်ပြောကာ Analyse လုပ်နေသူများ မဟုတ် ၊ လေသေနတ်များ တဖောက်ဖောက် ဖောက်နေသူများ မဟုတ် … ၊ စာရွက်တွေပေါ်သာ ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းနှင့် ပြောဆိုနေကြပြီး ပြင်ပကမ္ဘာတွင် မရင်ဆိုင်ဖူးသူများ မဟုတ်ကြပါ။ ပြင်ပတွင် လက်တွေ့ ရင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်သူများသာလျင် အရာအားလုံးကို ထိုးထွင်းသိမြင် ၊ ရဲရင့်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြ ၊ အတွေ့အကြုံများ ကြွယ်ဝကြပါတယ်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 12:56 PM
ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးပါ မလင်းလက်ရေ။
ဥပမာအားဖြင့် နိုင်ငံခြားသားတွေ မြန်မာပြည်မှာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ သူ့နိုင်ငံက ဥပဒေကို လေးစားတယ်ဆိုပြီး နအဖ အစိုးရအလိုကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဟာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် အကျိုးမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နအဖအစိုးရရဲ့ ဥပဒေတွေက မြန်မာပြည်သူ့အကျိုးကို ကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအလိုကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေတွေ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာလူထုကို ဖိနှိပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ဖြစ်လို့ပါဘဲ။
အလားတူပါဘဲ။ စင်္ကာပူမှာ လာရောက်နေထိုင်ရင် စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်တာထက် စင်္ကာပူပြည်သူ ပြည်သားတွေရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ထားတာက ပိုမိုသင့်လျော်ပါတယ်။ စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ ဥပဒေက လူသားတန်ဘိုးကို အလေးမထားတဲ့ဥပဒေ၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မလေးစားတဲ့ ဥပဒေမျိုးဆိုရင် အဲသည်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ဖီဆန်တာဟာ မှားတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ဘယ်သူနဲ့ မပေါင်းရဘူး။ ဘယ်ဝါနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် မဆက်ဆံရဘူး။ အတိုက်အခံနဲ့ မရောထွေးသင့်ဘူး။ ဘယ်နှယ့်ဗျာ…. ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင်တူနေရင်တော့ ကိုယ်ပေါင်းချင်တဲ့လူနဲ့ ပေါင်းမှာပေါ့။ ဒါ..ရာဇ၀တ်မှုမှ မဟုတ်တာဘဲ။ ကိုယ့်ဘ၀ကို (သူများကို အနှောက်အယှက်မပေးသရွေ့) ကိုယ်ကြိုက်သလို ရွေးချယ်နေထိုင်ခွင့်ရှိတာဘဲ။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျနေမှာလား။ လီကွမ်းယူ စိတ်တိုင်းကျနေမှာလား။
ဗမာနိုင်ငံလွတ်လပ်ဘို့ဆိုရင် မြန်မာတွေအနေနဲ့ အဲသည်လို ကျွန်စော်နံတဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို စွန့်ပစ်သင့်ပါပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
မြန်မာ့အရေးကို တကယ် စွန့်လွှတ်ပြီး လုပ်တဲ့သူရော၊ မလုပ်တဲ့သူရော တူညီချက်သောဆန္ဒကတော့ လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြှင့်မားပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကမ္ဘာ့နဲ့ယှဉ် ရင်ဘောင်တန်းကာ ငါ ... မြန်မာ လူမျိုးဟေ့လို့ ရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး ပြောချင်ကြမှာပါ။
အဲ့ဒီလို နိုင်ငံမျိုးဖြစ်လာအောင် မိမိအပါအ၀င် မိမိ မိသားစုကို ဥပေက္ခာပြုပြီး မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် တစ်ခုတည်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နေသူများဟာ လူသားတွေသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာ မှန်ကန်တိကျမှု ရှိချင်လည်း ရှိမယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံ မှားယွင်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို တတ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်နေတာကို အားပေးတယ်၊ ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် မှားသည် မှန်သည်က အဓိကမကျပါဘူး။ အရေးကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာ နှုတ်၏ဆောင်မခြင်း၊ ကိုယ်၏ဆောင်မခြင်းနဲ့ အတူတစ်ကွ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းပြီး ကျော်လွှားကြဖို့က ပိုအရေးကြီးသလို ပိုပြီး အပြုသဘော ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ ရပ်တည်ချက်အတွက် ကျေးဇူး အထူး..။
I do agree with you for this article!!!!! Sis Lin Let!!!!
this isavery mature way of write up, which did not mixed with emotions. keep up.. :) zy
" ဤမြေပေါ်နေလျင် ဤမြေ၏ စည်းကမ်းကိုတော့ လေးစားရမယ်ဆိုတာ သင့်လျော်ပါတယ်။ လူ့လောကကြီးမှာ လူတွေရဲ့ ကိစ္စအားလုံးကို တသမတ်တည်းတော့ ထားလို့မရပါဘူး .. ။ တခါတလေ မတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ၊ လူတွေမှာ ရွေးချယ်မှု မရှိတော့တဲ့အခါ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်နစ်နာခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် တုံ့ပြန်မှုဆိုတာကလည်း မျှမျှတတ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ "
Pack ur back and ready to go back?
I heard news that "Lin Let" been arrested and they will deport her to "Thailand".
ကျွန်မ ကိုယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ် အလုပ်များနေခဲ့တာပါရှင်။ အဖမ်းမခံရပါဘူး။ ဘယ်ကဘယ်လို သတင်းမှားတွေ ထွက်နေကြပါလိမ့် .. ။ နောက်၁နှစ်ထိတော့ စင်္ကာပူမှာ နေခွင့်ရှိပါသေးတယ် .. ။ နောက်၁နှစ်ရောက်မှပဲ ဘာဖြစ်မလဲ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ .. :)
အေးလေ အခုပဲကြည့်လေ...ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မရှက်တတ်ဘူး အခုထိ..နင်တို့ လို လေထဲက ပြောတဲ့သူတွေရှိလို့ လည်း ဟိုမှာ တကယ်ခံသွားရတဲ့သူတွေက ခံသွားရတာပဲ.. နင်တကယ်ဒီလောက် နားလည်ပါတယ်.. ပေးစပ်နိုင်ပါတယ်ဆို အခုပါသွားတဲ့ထဲမှာ ဘာလို့ ပါမသွားတာလဲ.. ပြောတော့ဖြင့်တစ်လုံးတစ်ခဲပီးရင် ဘယ်နားသွားနေ နေမှန်းမသိဘူး.. ပီးသွားရင် ပြန်ပေါ်လာပြန်ပီ.. ဒါနင်တို့ သောက်ကျင့်ပဲ.. အေး ငါ့ကွန်မန်ကို ဖျက်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး.. နင်ဖတ်ရင် ပီးတာပဲ.. ရှက်တတ်ရင် တော်တော်ရှက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဟာ.. တွေးရင်းတွေးရင်း နင်တို့ လိုလေသမားတွေကိုပဲ ပိုပီးသောက်မြင်ကပ်လာတယ်.. လုပ်လိုက်ပါ့လား.. အောင်မလေးရေထဲမိုးထဲဆို ဘယ်မှာမှန်းမသိဘူး.. ပီးရင်တော့ပြောပါပီ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင် သူ့ ကိုမမှီသလို ဘာလိုလို.. လေးစားလောက်ပါပေတယ်.. အမိ.. နဖူးလေးပေါ်လက်တင်ပီး ဖြေး၂လေး တွေးကြည့်ပါအုံး..
ကြောင်လှချည်လား pankyaung. အခုလို လာပြောကတည်းက တော်တော်ကြောင်နေပြီဆိုတာ သိသာတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်တယ်။ မိမိရောက်ရာနိုင်ရာမှာ မိမိနိုင်တာလေးပဲ လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်တယ်။ ကျွန်မဟာ စာရေးသူ .. ။ စာရေးသူပါဆိုမှ စာမရေးဘဲ လက်နက်သွားကိုင်ရမှာလားရှင်။ စင်္ကာပူကနေ ထွက်သွားရတယ်ဆိုတာ ဘလိုင်းကြီး ထွက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ နေထိုင်ခွင့်ကုန်မှ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေ။ အကုန်လုံး တပြုံကြီး မထွက်သွားရသေးလို့ နေထိုင်ခွင့်ကျန်နေသေးတဲ့လူတွေကို စော်ကားမော်ကား ရှင်အခုလိုပြောနေတာ ဘယ်လောက် စဉ်းစားအသိဥာဏ်နည်းလဲဆိုတာ အံ့ပါရဲ့ရှင်။ အခုလို ကြောင်တောင်တောင် ကွန်မန့်ကို တင်ပေးရတာပဲ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်နေပါပြီ။ အချိန်ပေးပြီး ကျွန်မစာတွေလာဖတ် ၊ ဒေါသထွက်ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)